Iyathengiswa le ncwadi enezinkondlo ezingashicilelwe zikaPablo Neruda | Izincwadi Zamanje
Iyathengiswa le ncwadi enezinkondlo ezingashicilelwe zikaPablo Neruda
Usuku olukhulu kubathandi bezinkondlo futhi Pablo Neruda ikakhulukazi: namuhla incwadi enezinkondlo ezingashicilelwanga yimbongi yaseChile iyaqhubeka ukudayiswa.
Ngithinta izinyawo zakho emthunzini nezinye izinkondlo ezingashicilelwe, ifika namuhla ezitolo zezincwadi ngenxa yendlu yokushicilela iSeix Barral, eyishicilela ngaphakathi kweqoqo le-Biblioteca Breve.
Incwadi iqoqa izinkondlo zothando ezingamashumi amabili nanye nezinye izingqikithi ezingafakwanga emisebenzini eyashicilelwa ngumbhali. Ukubaluleka okukhulu kwalo msebenzi kuxhomeke ekutheni izinkondlo ziyisikhathi esivela ekuqaleni kwawo-1973 kwaze kwaba ngaphambi nje kokufa kwakhe ngo-XNUMX. Jikelele hlabelela (1950) futhi zabhalwa esikhathini esivuthiwe sikaPablo Neruda.
Ukutholakala kukhiqizwe lapho umqondisi womtapo wezincwadi kanye nokugcinwa kwengobo yomlando we Isisekelo sePablo Neruda ngiqale ukukhathala imibhalo yesandla yembongi, isakazeke ezincwadini zokubhalela nasemabhokisini agcwele amaqabunga avulekile kanye nezicucu zephepha.
Kusisefo kuqhamuke okusalungiswa kanye nokwangempela kwemisebenzi yakhe eminingi eshicilelwe, izingcezu ezingenamilo, imibhalo engaqediwe noma elahliwe, kanye nezinkondlo zezimo.
Kepha phakathi kwawo wonke lowo mqulu, kwatholakala izinkondlo ezingama-21 ezifanele ukuhlelwa, ekuphakameni komsebenzi wakhe oshicilelwe, ngokusho kukaDarío Oses, umqondisi weSisekelo.
Ukunikeza incwadi ukuhlangana okuthile, umbandela wokuhlela bekungukuqoqa izinkondlo eziyisithupha zothando ebhlokini lokuqala bese kuthi ezinye eziyi-15 ezisele esahlukweni ezinye izinkondlo.
Kugcine ukuwa leli qoqo lezinkondlo elashona selifikile ezitolo zezincwadi zaseChile futhi namuhla ekugcineni lifinyelela ezitolo zezincwadi zaseSpain.
Akukhona okokuqala ukuthi kuvele imibhalo esanda kushona yalo Mklomelo kaNobel. Izinkondlo zakhe zobusha nobusha zashicilelwa ngaphansi kwezihloko Umfula ongabonakali (1980) futhi Izincwajana zeTemuco (ishumi nesishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalolunye nesithupha). Ngakolunye uhlangothi, ukubhala kwakhe noMailde Urrutia kwashicilelwa e1996.
Ngakho-ke, akumele sikhiphe umthetho wokuthi siqhubeke nokuthola isimanga esigcinweni somtapo wolwazi nakulomtapo wolwazi okhuthele futhi ongafi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izaziso » Iyathengiswa le ncwadi enezinkondlo ezingashicilelwe zikaPablo Neruda
UTom Hardy ushiya iqembu lokuzibulala
Izincwadi ezihamba phambili zango-2014